Isicwangciso-qhinga se-E-commerce seMultichannel seXesha leeholide eliTshintshayo | Martech Zone
Isicwangciso-qhinga se-E-commerce seMultichannel seXesha leholide eliTshintshayo
NgoLwesithathu, Novemba 25, 2020 NgoLwesithathu, Novemba 25, 2020 UJosh Wetzel
Umbono wangoLwesihlanu oMnyama kunye noMsombuluko weCyber ​​njengosuku olunye lwe-blitz utshintshile kulo nyaka, njengoko abathengisi abakhulu babhengeze uLwesihlanu oMnyama kunye noMsombuluko we-Cyber ​​ujongene nenyanga yonke ka-Novemba. Ngenxa yoko, kuye kwancipha malunga nokubambezela into enye, usuku olunye kwibhokisi engenayo esele igcwele, nangakumbi ngokwakha isicwangciso sexesha elide kunye nobudlelwane nabathengi kulo lonke ixesha leholide, ukuveza amathuba afanelekileyo e-ecommerce Amaxesha afanelekileyo kusetyenziswa ukujolisa kumajelo okubandakanya kwi-Intanethi.
Lo ikwangunyaka owahlukileyo ngendlela yokuba i-coronavirus ichaphazele uluhlu lwebhodi. Ngenxa yokumisa imveliso kunye nokulibaziseka, kuyakubakho ukunqongophala okungaphezulu kakhulu kwezinto zokudlala ezifuna kakhulu ngonyaka. Ke ngobuchule ukukwazi ukuqonda umdla wabathengi kunye nemixholo kunye nokunxibelelana ngobuchule kwezinye iindlela okanye uhlaziyo (ngokuthumela ixesha lokwenyani, ukubuyela kwizaziso zesitokhwe, umzekelo) kuya kuba yinto ephambili ukuguqula inzala yomthengi ibe kukuthenga.
I-COVID-19 ibingunobangela wotshintsho olukhulu lokuthenga kwi-Intanethi ngeli xesha leholide.
Kwakukho ukutsiba okungama-45% kweYoY kwiQ2 kwintengiso ekwi-Intanethi kwaye kufanele ukuba silindele ukubona ukunyuka okufanayo kwi-Q3 kunye ne-Q4 njengoko abathengi bobabini bekhululekile xa bethenga kwi-Intanethi kwaye benyanzelwa ngenxa yezithintelo zevenkile ebonakalayo kwiindawo ezininzi zelizwe.
umthombo: Iziko laseMelika lokuBalwa kwabantu
I-Amazon Prime Day ngo-Okthobha ikwakhokelele kukhuphiswano olukhawulezayo olunikezela ngeentengiselwano zangoLwesihlanu oMnyama kulo nyaka, zenza iwindow yokuthenga ixesha elide ngaphaya kwempelaveki enzima.
Ngaphezulu kwe-25% yazo zonke izinto ezithengiswayo ziya kubakho kwi-Intanethi ngowama-2024 kwaye iForrester iqikelela ukuba ukuthengiswa kweentengiso zizokwehla nge-2.5% kulo nyaka.
Ukuthatha i-mindset eqhutywa yidatha kubalulekile kubo bonke abathengisi abafuna ukusika ingxolo ngexesha lamaxesha oxakekileyo. Ngamashishini amancinci akhuphisana nabathengisi abakhulu ngokujongwa kwabathengi kunye nokuthengisa, iivenkile kufuneka zixhomekeke kwitekhnoloji kunye nokwenza umntu ukuba acinge ngaphandle kwebhokisi yomzekeliso ukuze avele kwisihlwele.
Ukuthengiswa kweMultichannel kubaluleke kakhulu kuThengiso lwabaThengi
Ukuthengiswa kweMultichannel kubukho obungaguquguqukiyo kubathengi bakho kwiindlela ezininzi, ezinjengewebhu, iselfowuni, intlalontle kunye nemiyalezo. Esona sibonelelo sikhulu ngumthengi wakho (umthengi okanye undwendwe) unokunxibelelana nophawu lwakho ngokukhetha iindlela ezahlukeneyo, kwaye unokuba namava angaguquguqukiyo, angenamthungo kunye negama lakho ngaphandle kweziteshi azithandayo. Intengiso yemultichannel ibalulekile kwindlela eyahlukileyo yokusetyenziswa komthengi wabathengi banamhlanje, abathe balindela ukuthengisa okujolise kuwe.
Amashishini abekwe kakuhle kwezi ndawo ngawona avulelekileyo ukuba atshintshele kwimeko-bume eguqukayo, ngakumbi kulo nyaka unikwe ubhubhane. Amashishini amkela iwebhu, iselfowuni, kunye noluntu kwaye asebenzise iindlela ezahlukeneyo zemiyalezo efana ne-imeyile, i-Push, kunye ne-sms ziya kuqinisekisa ukuba zikhona kwindawo nganye umthengi afuna ukuzibandakanya nayo.
IMultichannel ayisiyo nje iphulo, sisicwangciso esiliqili. Isinyathelo sokuqala kukuqonda apho abathengi bakho bangoku babandakanyeka khona, kwaye emva koko ubeke phambili ukuphuhlisa amava ahambelanayo notyelelo ngalunye lwala majelo. Qala ngewebhusayithi ephendulayo, ucinga ukuba ihlaziywa ukuze ifikeleleke kwi-PC, kwiFowuni nakwiiThebhulethi zabakhenkethi. Emva koko gcwalisa amajelo okuzibandakanya aphambili kunye namava afanayo kwiindawo zosasazo lwentlalo kunye nawo onke amajelo akho emiyalezo. Oku kufanele ukuba kubandakanya i-SMS, i-Push kunye ne-imeyile, kwaye usebenze ukuze wenze ngokokuthanda komthengi ngamnye.
Njengomzekelo wentengiso yeendlela ezininzi ezisebenzayo, sinokujonga iWarbyParker: banabathengi ekujoliswe kubo ngokwamanani, bakhile amava omthengi kunye nawedijithali. Basebenzisa izaziso zokutyhala ukubandakanya abathengi abasebenzayo, i-SMS yokuqeshwa kunye nokubandakanya kwakhona abasebenzisi abakhethe ezinye iindlela, kwaye basebenzise i-imeyile ukuthumela imiyalezo njengeerisithi. Bade basebenzise imeyile ngokuthe ngqo ukuqaqambisa iindlela ezintsha. Indawo nganye yokubamba abathengi ngumyalezo ongaguquguqukiyo wokunikezelwa kwabo, kunye nejelo elungiselelwe ngononophelo kwinjongo yemiyalezo.
IMultichannel yeNtengiso yeNdlela yokuSebenza
Nazi ezinye zeendlela ezilungileyo zokufikelela ngokukuko kubasebenzisi bakho kunye nokwandisa abathengi ngeholide besebenzisa isicwangciso-qhinga sonxibelelwano esinamajelo amaninzi:
Qonda apho abathengi bakho basebenzayo kwaye batyale imali kula majelo. Unokukhetha nje ijelo elifanelekileyo, kuba imijelo emininzi ayithethi kwitshaneli nganye. Khetha ezo zenza ezona njongo ziphambili kwiinjongo zakho zeshishini, imveliso yakho, kwaye okona kubaluleke kakhulu, umthengi wakho.
Ukuseka ukungqinelana. Yenza ngokwezifiso yonke into yejelo, kodwa gcina ukungaguquguquki kophawu kunye nemiyalezo kubo bonke
Zuza ilungelo lakho lokuthengisa kwisitishi ngasinye: Ukungena kunye nokusayinela kunokuhamba ngokukhawuleza kwaye abasebenzisi banokukhawuleza ukurhoxisa ukufikelela okuphumeleleyo. Qiniseka ukuba ulandela ngesithembiso sakho sokubonelela ngexabiso lomsebenzisi lokwenyani kwisitishi ngasinye. Cinga ngomgaqo we-1: 4 wemidiya yoluntu: kuyo yonke i-1 yokwazisa ngokwazisa, qiniseka ukuba uthumele imiyalezo emi-4 egxile kubasebenzisi enexabiso lokwenyani lomthengi.
Icandelo, isahlulo, isahlulo. Ukuqhuqha kunye nokuqhuma yinto yexesha elidlulileyo, kwaye abathengi bakhawuleze balindela umyalezo ofanelekileyo kunye nowakho kuwo onke amajelo. Nika abasebenzisi ithuba lokukhetha umxholo abafumana kuwo amajelo. Sebenzisa umsebenzi wabo kunye nayiphi na idatha yokuziphatha ekufuneka uyenze imiyalezo yakho ukuba ibe yeyakho kangangoko kunokwenzeka, ngelixa ususa imiyalezo engenamsebenzi.
Yenza okungxamisekileyo ngokunyuswa kwexesha elinomdla. Umzekelo, Yenza inkuthazo "yesivumelwano seyure" enomdla, ukudala okungxamisekileyo nangakumbi ngokunikezela ngesaphulelo esongezelelweyo ngaphezulu kwexabiso eliqhelekileyo lokuthengisa, kwaye usebenzise oku njengeqonga lokunyusa uluhlu lwabathengi lwe-Push & SMS. Ivenkile yokuThengisa ngakumbi, I-InspireUplift ibone ukwanda nge-182% kwingeniso ngokusebenzisa izaziso zokutyhala kwisicwangciso-qhinga sabo sokubandakanya abathengi.
Yenza iMiyalezo yakho ibonakale ityebile. Yakha unxibelelwano olufutshane kodwa olunempembelelo ngaphakathi komyalezo wakho. NgoLwesihlanu oMnyama, izaziso ezityebileyo zinokwazisa abasebenzisi ngeentengiso ezizayo kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kosuku olukhulu. Unokudala ukubala ubala kude kuqale uLwesihlanu oMnyama. Emva koko, xa nje i-frenzy iqala, ungasebenzisa imiyalezo etyebileyo ukukhumbuza abasebenzisi ukuba lingakanani ixesha eliseleyo kude kube sekupheleni koLwesihlanu oMnyama (okanye nanini na xa isivumelwano sakho siphela).
Lungiselela kwangaphambili usebenzisa uvavanyo lwe-A / B. Uvavanyo lwe-A / B lunokuba sesona sixhobo sixabisekileyo kwi-arsenal yakho, ukuvavanya iinguqulelo ezimbini zomyalezo wakho ngokuchasene nomnye nabaphulaphuli abafanayo, kunye nokujonga iziphumo. Sebenzisa umkhondo womsitho ukuqinisekisa ukuba nguwuphi umyalezo oqhuba isiphumo osifunayo (ngaphaya konqakrazo nje), kwaye usebenzise oko ukukhulisa iphulo kubaphulaphuli bakho ngokubanzi.
Alithandabuzeki elokuba lo ngunyaka ongaziwayo kwi-eCommerce, kodwa ngokulungelelanisa kunye nokunamathela kwezona ndlela zilungileyo kunye nemiyalezo elungileyo kunye neendawo zokuchukumisa kunye nabathengi bakho, iimveliso zisengayiqhuba ngempumelelo ingeniso ukuphuma kwisihlwele.
tags: 2020Uvavanyo lwe-A / BULWESIHLANU omnyamaukungqinelana kwegamaizaziso zesikhangelie-commerceeCommerceAmazingmultichannelintengiso yeendlela ezininziiqhinga lokuthengisa elininziZonkeisahluloIvenkile yokuThengisainexesha elifanelekileyo
UJosh Wetzel liGosa eliyiNtloko leRhafu le-OneSignal, inkokheli yentengiso kuthethathethwano lwabathengi, amandla okushenxisa iselfowuni, i-web push, i-imeyile kunye nemiyalezo yangaphakathi nohlelo yeenkampani ezingaphezu kwama-800,000. Uneshumi elinambini lomsebenzi wokwakha urhwebo lwedijithali kunye namashishini esoftware, eneempawu zobunkokeli kwi-eBay, PubMatic naseBazaarvoice.
I-WPML: Guqula indawo yakho yeWordPress ngePlagi yeeLwimi ezininzi kunye neeNkonzo zokuGuqula
Ukuhamba kwe-UZE: Iqonga leMarike lokuThengisa ngeDijithali ngaphandle kwekhaya